Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa CentOS 7? Fast gwara. | Kubva kuLinux
Mhoro shamwari kubva kuLinux, sezvo imi mese muchiziva kuti ndiri chigaro chisina zororo uye ini ndinowanzo gadzira distros kuchikara kuti ndikupe magwara. Asi izvo zvinoda kuyedza kwakawanda, basa uye nguva uye zviri kunetesa kudzoreredza sisitimu mwedzi wega wega :).
Ndataura zvataurwa pamusoro, ndakaita sarudzo yekugara chete neiyo base system iyo yandichagadzirisa. Ini ndakasarudza se base system a CentOS 7 game Gnome-Shell sezvo nharaunda iyi iri ine zvibereko zvikuru zvandinoziva.
Ndisati ndatanga, ini ndinokupa iwe mimwe mifananidzo:
Iye zvino ngatitangei kugadzirira yedu nyowani system.
Semudzi isu tinoita
yum kugadzirisa && yum autoremove && yum kuisa yum-plugin-zvinotangira
yum kuisa epel-release
Ivo vanotora aya .rpm vobva vaaisa:
Iye zvino wawanikwa mu /etc/yum.repos.d uye ivo vanogadzirisa zororo rese rinoonekwa mudhairekitori ichiwedzera zvinotevera zvinotevera zvekushandisa panoperera imwe neimwe yekuchengetera:
kutanga = 1 kweCentOS-Base.repo, epel.repo kutanga = 10 ye nux-dextop.repo, adobe-linux-x86_64.repo
# CentOS-Base.repo # # Mirror system inoshandisa iyo yekubatanidza IP kero yemutengi uye iyo # yekumisikidza mamiriro egirazi rega rega kutora magirazi anovandudzwa uye # enharaunda padyo nemutengi. Iwe unofanirwa kushandisa izvi kuCentOS inogadziridza # kunze kwekunge uri nemaoko kunhonga mamwe magirazi. # # Kana iyo mirrorlist = isingashande iwe, sekudonha kumashure iwe unogona kuyedza iyo # yakataurwa kunze baseurl = mutsara panzvimbo. # # [base] zita = CentOS- $ releasever - Base mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? release = $ release & arch = $ basearch & repo = os & infra = $ infra # baseurl = http: / /mirror.centos.org / centos / $ releasever / os / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 priority = 1 #re Releases [inogadziridza] zita = CentOS - $ kusunungura - Gadziridzo yegirazi = http: //mirrorlist.centos.org/? release = $ release & arch = $ basearch & repo = updates & infra = $ infra # baseurl = http: // mirror .centos.org / centos / $ releasever / updates / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 priority = 1 #mawedzero mapakeji anogona ive inobatsira [yekuwedzera] zita = CentOS- $ kuburitsa - Yakawedzera girazi = http: //mirrorlist.centos.org/? Regedza = $ kusunungura & arch = $ basearch & repo = yekuwedzera & infra = $ infra # baseurl = http: / /mirror.centos.org/centos/$releasever/extras / iyo inowedzera mashandiro emapakeji aripo [centosplus] n ame = CentOS- $ releasever - Plus mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? release = $ release & arch = $ basearch & repo = centosplus & infra = $ infra # baseurl = http: //mirror.centos. org / centos / $ releasever / centosplus / $ basearch / gpgcheck = 1 inogoneswa = 7 gpgkey = faira: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-1
Kamwe kana zvirevo zvataurwa zvashandurwa, isu tinoenderera:
yum kuisa java-1.7.0-openjdk icedtea-web thunderbird firefox libreoffice libreoffice-langpack-es filezilla p7zip unzip zip gimp kernel-devel dkms telnet mc wget htop ntfs-3g yum kuisa gstreamer-plugins-yakanaka gstreamer-plugins-bad gstreamer plugins-yakaipa yum groupinstall "Zvishandiso Zvekuvandudza" "Makiraibhurari Ekuvandudza" yum gadza vlc lm_sensors unrar foomatic sensors-detect
Uye shamwari dzakagadzirira. Nezvo yedu CentOS 7 yakagadzirirwa 🙂
Kwaziso uye Goredzva Rakanaka 2015.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa CentOS 7? Fast gwara.
yakanaka kwazvo tuto :), ini ndinotora mukana wekubvunza ichokwadi here kuti centos ichave ichitenderera kuburitswa?
Uri kuenda kuita kuburitsa kusunungura?
Muchinyorwa ichocho pane chinongedzo kuCentOS tsamba yekutumira.
Chandakanzwisisa ndechekuti ivo vachaita zvakafanana naDebian pavanoburitsa yayo 7.x vhezheni semuenzaniso.
Kwete, kana CentOS kana RHEL iri uye haizove iri Rolling Kuburitswa.
Izvo zvakaitwa ndezvekuti iyo yekuisa midhiya iri Rolling. Rega nditsanangure ... Parizvino midhiya yekumisikidza yanga yakafanana sezvo imwe vhezheni yeCentOS yakabuda. Naizvozvo, kana kumisikidza kwaitwa, iwe waifanirwa kuisa mazana emamegabhayithi kana kunyangwe magigabytes mukutanga kugadzirisa.
Iye zvino izvo zvauri kuenda kuita zvinosanganisira zvese zvakagadziriswa mune yekumisikidza midhiya, saka yekutanga yekuvandudza ichave iri nyaya yemamegabytes.
Mushure mekuverenga gwaro iri, ndinoshuva kuti dai ndaigona kuisa Centos, asi handidi. Zvakandiwandira. Sei usingaite gwara rekumisikidza Centos yecumsy?. Zvinenge zvese zvandakaona kunze uko kwekuparadzirwa uku kuri muChirungu.
Nenzira, Peter, mukomana akaita sei kwauri kuita munzvimbo yakaita seCzech Republic? Vasikana vacho. . . Makadii?
Vasikana vakanaka, hongu, asi chikonzero nei ndiri pano ndechekuti ndine basa rinoita kuti ndiende pakati peCzech Republic neSpain: D.
Kana zviri zvechinongedzo, ichi chinyorwa checumsy ... Nyore, yakajeka uye nekukurumidza:
Pasina kupokana izvo zvaunoda ServOS, dhawunorodha vhezheni 2.0 iyo yakavakirwa paCentOS 7 uye ine gnome3 nekumira yakagadzirira kushandiswa uye yakagadzirirwa Desktop, zvinokushamisa iwe. Iko kuburitsa kuburitsa uye kune rutsigiro kusvika 2024 🙂
Iyo liveCD yakagadzirirwa maSeva sezvo iine chete hwaro uye inogara 700MB yayo ISO
Iyo liveDVD ndiyo ine zvese zvakakosha zvirongwa kuti utange kushanda palaptop yako kana PC uye zviri nyore kwazvo kuisa! 🙂
pinda kudhanilodha kwe http://www.serv-os.net uye edza-iyo! usazvidemba! 🙂
Matipi akanaka, kunyangwe ndingadai ndaikuda iwe kuti uite dzidziso yekuti ungatsiva sei systemd neimwe init.
PS: Ndiri kuyedza nhare yangu yandakanunura kubva mukukanganwa.
Goredzva Rakanaka 2015 kutanga pane zvese :). Nehurombo (kana kwete) systemd haigone kubviswa kuCentOS 7 sezvo ichiitwa mune zvese.
Kunyangwe zvakadaro, iwe unofanirwa kuzvibvunza iwe kana systemd yakanyatsoipa nekuti mumaonero angu matambudziko aakange akagadziriswa (zvirinani muCentOS).
Kana iwe usingade systemd kana uchida chimwe chinhu chisina kubatana, hauna imwe sarudzo asi kushandisa kumwe kugovera (debian semuenzaniso), ini pachangu ndinoita zvakanaka ne systemd pane desktop asi pamaseva ini ndinoshandisa yechinyakare init, kunyanya kudzivirira kutama
Pindura kuna lmad
sei kuisa Centos sevha?
Iwe unodhawunirodha iyo shoma cd, isa iyo woenda. Uri kuenda kunotora CentOS isina X uye nezvakaringana chete kumaseva.
Ndiri kuiyedza mazuva ano, zvakanaka kwazvo, ini ndanga ndichiedza kubvisa networkmanager nekuti zvinoita sekunge ini ndinokunda static ip asi yakaputsa sisitimu, hapasisina daemon reneti senge mune centos 6? Systemd ine chekuita?
@dhunter haufanire kubvisa chero mapakeji, kuti zviite nyore, gadzirisa mapindiro uye kana wambogadzirirwa ita, kubva kune chinongedzo;
sudo systemctl kudzima NetworkManager
kana sepakutanga kuti zvinoenderana.
sudo chkconfig NetworkManager yabviswa
sudo systemctl inogonesa network
chkconfig network pa
reboot uye enda
Unogona kuenderera uchishandisa sevhisi .-- tanga kana kutangazve mirairo sezvo ichienderana 🙂
Jose Cuervo akadaro
Pindura kuna Jose Cuervo
Izvo chete zvandaitsvaga.
Uri kuita sei ne centos 7?
Mune imwe posvo iwe akataura kuti mumaonero ako inoshanda zvirinani pane fedora 21.
Saka ini ndaida kukubvunza kana iwe uchigona kuisa vmware 11 uye gns3 1.2 pane centos 7.
Ndinoda kuziva kuisa xD
Ndisati ndamboshandisa openuse 13.2 uye ndaive nemapurogiramu maviri aya achimhanya asi ndichigadzira
3 mifananidzo muvmware yangu laptop yaive yakaturikwa dzimwe nguva. Ndine 12Gb ram uye i7 processor.
ndichitsvaga mugoogle ndakaona kuti cache yegondohwe yakakwira zvakanyanya kune iyo mifananidzo muvmware, ini ndaishandisa kde uye
Ini zvakaitika kune lxde iyo iyo mifananidzo yaimhanya pasina matambudziko (imwe neimwe mifananidzo yaive ne2gb ram).
Nei izvi zvichiitika? XD nekuda kwekuti desktop iri nyore? Ini ndinofanira kunge ndine yakawanda RAM sezvo ini ndine 12GB asi gondohwe cache iyo inogadzira yakaenda nayo kumusoro xD.
Zvakanaka ndabva panhaurwa haha, ndanga ndichida kukubvunza kuti uri sei necentos 7.
; maita basa nekutumira kwako ndiri kuverenga xD dzinoverengeka, freebsd yako iri sei? zvaigona kufamba zvakanaka palaptop yangu? Une mapurogiramu andinotaura pamusoro pawo here? haha zvakare ndakasiya musoro xD
Mhoroi, CentOS 7 yakanaka chaizvo. Iwe uchakwanisa kuisa mapurogiramu maviri uye kune ruzivo rwakawanda nezvazvo.
Kana zviri zveFreeBSD inogona kushandiswa mune chero chinhu. Izvo hazvina basa kana iri mumaseva, maPC kana malaptop ... Ehe, mumaPC nemalaptop zvinobva zvamira kusagadzikana. Ini ndinokurudzira kushandisa FreeBSD chete pane maseva.
Iwe unoshandura more distro kupfuura Petercheco bhachi. Ichokwadi kuti Freebsd pakombuta haigadzikane, asi iro rekuwedzera simba rinofanira kuitwa rinopfuura mubayiro. Freebsd ine hunyanzvi hwakawedzera tekinoroji, semuenzaniso zfs uye Dtrace zvinova zvinoshamisa chaizvo. Uye nei usingazvitaure, haina chiedzwa chinonzi lennartOS (oops, ndine hurombo, systemD xD).
Mhoro @ weyland-yutani,
Gore rinofara pamberi pechinhu chero chipi zvacho: D. Handisi kuti FreeBSD yakaipa uye ndinoichengeta pane sevha sezvo kuitiswa kwayo pamaseva kuri kukurumidza uye zvirinani mumaonero angu "kunanga" kupfuura nehama yayo Linux pamwe nekuve kune imwe nhanho pazvinouya kuchengeteka pakati pevamwe.
Asi pane yangu pc uye laptop zvave kusagadzikana sezvo iwe usina Gparted, chimwe chinhu chakafanana neNetworkManager uye hazvibvumirwe newifimgr chete kana nekuda kwenyaya yekufanirwa kunge uchisimudza USB disks nguva dzese. Pakutanga handina kunetseka nezvazvo, asi mushure memwedzi wekutanga palaptop zvakandipengesa: D.
CentOS 7 inosangana neni nezvose uye zvese zvinofanirwa kutaurwa. Anoita basa rake nemazvo. Kana iri systemd ... Munhu, kwete kuti ndinoifarira zvakanyanya, asi muRHEL / CentOS zvese zvinoshanda nemazvo uye handina kuona chero chinhu chinoshamisa mukushanda kwesisitimu.
Ndinonzwisisa chinzvimbo chako. Ini, zvakadaro, ndave ndakasimba Arch Linux mushandisi kwemakore mazhinji, iyo Arch yekare kusati kwasvika systemD uye shanduko ku / usr. Ndosaka ndichinzwa sehove iri mumvura muFreebsd, nekuti ine zvakawanda zvakafanana neArch yakare.Handina basa nekushandisa iyo terminal kune zvimwe zvinhu, sekukwirisa ma disc, kupisa DVD nezvimwe ... chii chimwe, Ndinozvifarira saizvozvo. Kutenda Freebsd ndagadzikana nesoftware yemahara zvakare. Nenzira, rezenisi reBSD rakandinakira kupfuura iro GPL. Asi hei, ndomumwe musoro ..
Goredzva Rakanaka newewo.
Kana iwe ukafananidza neakanaka-maneja, libvirt uye qemu-kvm ndinofunga iwe une mukana uri nani, vmware chikara.
VMware chikara zvichireva nezvekushandisa zviwanikwa?.
Chero chero gadziriro yakasununguka uye inonzwisisika yako.
Mangwanani, maita rubatsiro kutanga. Chinhu chechipiri kukuudza icho kana ini ndichiedza:
yum groupinstall "Zvekuvandudza Zvishandiso" "Mabhuku Ekuvandudza", ndinowana izvi:
Akatakura plugins: fastestmirror, langpacks
Iko hakuna akaiswa mapoka mapoka.
Pamwe mhanya: yum mapoka maka mucherechedzo (ona murume yum)
Kuisa girazi kumhanya kubva kune yakachengetwa hostfile
* chigadziko: mirror.tedra.es
* zvekuwedzera: mirror.tedra.es
* inogadziridza: mirror.tedra.es
Yambiro: Kuvandudza kweboka hakuna mapakeji ekuisa.
Yambiro: boka rekuvandudza Raibhurari haripo.
Pamwe mhanya: yum mapoka makaisa (ona murume yum)
Hapana mapakeji mune chero rakakumbirwa boka rinowanikwa kuisa kana kugadzirisa
Ndingafarire kana iwe ukakwanisa kundipa ruoko.
Mhoro, hapana chinoitika. Pane musiyano pakati peFedora neCentOS ... MuCentOS hamuna "Kubuditsa Raibhurari" inowanikwa uye muFedora iri.
Ndizvo. "Maturusi Ekuvandudza" anoisa zvese ega.
Ndatenda kwazvo neruzivo rwese. Zvakanaka, zvichengetedze!
Hunhu hweZuum P60